Uvavanyo lomgangatho - Shenzhen BXD Machining Co., Ltd.
Icandelo lePlastiki ye-CNC
5 Axis CNC Iintetho
Icandelo leSinyithi sePhepha
Ukuqinisekiswa komgangatho we-BXD
Umgangatho sisiqinisekiso esomeleleyo sophuhliso lwenkampani, ngokucacileyo, ukwenziwa kwemveliso sisitshixo kumgangatho wemveliso, ukuhlolwa sisiqinisekiso semveliso. I-BXD ilandelwe ngokungqongqo kwi-SOP kwinkqubo yemveliso. Iimveliso zethu ezizinzileyo nezifanelekileyo zifumene ukuthembela kwabathengi bethu iminyaka.
I-BXD ibisoloko ithathela ingqalelo ulwakhiwo kunye nophuhliso lomgangatho. Sidlulile kwi-ISO9001: 2015 inkqubo yolawulo lomgangatho. Siyaqhubeka nokuphucula nokunyusa izixhobo zovavanyo.
Izixhobo zovavanyo zezi: i-3D CMM, i-altimeter, ubunzima bokuvavanya, izixhobo zokuvavanya ityuwa, imitha yokulinganisa ifilimu, i-vernier caliper, ubukhulu be-micrometer yangaphakathi, i-micrometer yangaphandle, iprojektha, ipini yokubhaqa umngxunya okhethekileyo wenaliti, umlinganiso wamazinyo oqhelekileyo (ipaseji yokumisa), kunye ezinye izixhobo.
ISO9001: Isatifikethi sika-2015
Uvavanyo Contents emva Pimveliso
Ngexesha lokuvelisa, inkampani yethu yenza ngokungqongqo ukusebenza, ukuvelisa kunye nokuvavanya ngokweemfuno zabathengi. Umxholo wovavanyo ubandakanya: uvavanyo lwesitshizi setyuwa, uvavanyo lokubambelela, ukutyabeka (ipeyinti) uvavanyo lokuqina kwefilimu, uvavanyo lokuqina, uvavanyo lwamanzi, uvavanyo lwe-anti-static, uvavanyo lokuqhuba kombane, uvavanyo lokungcangcazela, uvavanyo oluphezulu kunye nolusezantsi lobushushu, uvavanyo lomsebenzi okhethekileyo, ukwakheka kwezinto uvavanyo, ibhloko yokuthelekisa isampulu yombala, njl.Ukuhlolwa kweMveliso kuya kuhamba kunye nengxelo yokuhlolwa kwemveliso kunye nemveliso ngokweemfuno zabathengi.
Kwi-BXD CNC machining, uhlolo kunye nolawulo lomgangatho yeyona nkqubo ibaluleke kakhulu ukwenza imveliso ekumgangatho ophezulu. Ukuhlolwa kunye nokulawulwa komgangatho kuqinisekisa umgangatho osemgangathweni ngokujonga imveliso ngexa lokuvelisa kumanqanaba ahlukeneyo.
Ukuqinisekisa ukuba iimveliso ziyahambelana neemfuno zabathengi bethu, ukusuka kwimathiriyeli eluhlaza ukuya ekuhanjisweni, onke amanyathelo enkqubo yokuvelisa aphantsi kolawulo. Zonke iimveliso ziya kuba phantsi kokutshekishwa kwesi-3 kuyo yonke le nkqubo:
1. Ukuhlolwa kwemathiriyeli eluhlaza: jonga impahla eluhlaza phambi kokuba uyamkele kwaye uyigcine
2. Ukuhlolwa kwe-in-line: amagcisa ayazitshekisha onke amalungu kunye nokujonga indawo ye-QC ngexesha lokuvelisa.
3.Ukuhlolwa kokugqibela: I-QC 100% ihlole imveliso egqityiweyo ngaphambi kokuhambisa kunye nokukhetha eyona ndlela yokupakisha ilungileyo ukunqanda umonakalo ngexesha lokuhamba.
Umatshini we-CNC Standards
Silandela imigangatho ye-ISO 2768 ye-CNC Machining.
Iqela lethu lizinikele ekuqinisekiseni ukuba onke amalungu owayalelayo aziswa ngexesha kwaye ahlangabezana nokulindelwa ngumgangatho wakho.
I-BXD inamava angaphezulu kweminyaka eli-10 kwiindawo zokuvelisa izixhobo ze-CNC, sizibophelele ekuboneleleni ngeenkonzo ze-CNC ezincomekayo.
Ukuveliswa kwesinyithi sephepha
F1, Ukwakha A, iZhongyuan Industrial Area, Dalang Road, Isithili saseLonghua, Shenzhen, Guangdong, China
Umnxeba:+86 177 2781 0685